Ifulethi elihle lesimanje elinombono, eduze kwaseGrenoble - I-Airbnb
Ifulethi elihle lesimanje elinombono, eduze kwaseGrenoble
Saint-Ismier, Auvergne-Rhône-Alpes, i-France
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Gooddays
Indawo yokuhlala enhle yesimanje futhi ekhanyayo engama-70m2 enethala elinikeza umbono omuhle wokhahlamba lwezintaba zaseBelleddonne. Itholakala eSaint-Ismier, imizuzu eyi-15 ukusuka eGrenoble ngemoto futhi iseduze nazo zonke izinsiza. Ilungele abantu abangu-4 (umbhede ongusofa ongu-1 nombhede ongu-1 okabili). I-Wifi, isimo somoya, umshini wokuwasha kanye nesethi yoku-ayina nakho kufakiwe.
Kuzohlinzekwa amalineni namathawula.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela ufunde incazelo enemininingwane ngezansi.
Izici ezijatshulelwa izivakashi zami:
- Indawo yokuhlala enhle kakhulu enethala elinokubukwa okumangalisayo kohla lwezintaba zaseBelleddonne.
- Ahlome ngokugcwele, amalineni, amathawula, amakhithi ayize azohlinzekwa.
- Itholakala eSaint-Ismier eduze komgwaqo omkhulu, imizuzu eyi-15 ukusuka eGrenoble ngemoto.
- Kufinyeleleka kalula (ngebhasi nangemoto).
- Ifulethi linesimo somoya.
Ezinye izici okufanele uzicabangele:
- Indawo yokuhlala isesitezi sokuqala, ifinyeleleka kuphela ngezitebhisi.
- Uzoba nesethi eyodwa yokhiye onawo.
- Indawo yokuhlala iseduze nomgwaqo omkhulu, okungase kubangele ukungcoliswa komsindo ngesinye isikhathi
Uzoyithokozela indawo yami ngomhlobiso wayo, ukukhanya nokunethezeka.
Ifulethi lingakwazi ukuhlalisa abantu abangu-4 futhi litholakala esitezi sokuqala kufinyeleleka kuphela ngezitebhisi.
Ukuze ukusebenzise ngokugcwele ukuhlala kwakho, uzoba nalokhu okulandelayo onakho:
- Igumbi lokuhlala elinobungane: usofa nombhede wosofa wabantu abangu-2, itafula lekhofi, ithelevishini, indawo yokudlela enetafula lokudlela labantu abangu-4.
- Ikhishi elihlome ngokuphelele: isiqandisi, ifriji, i-microwave, ihhavini, isitofu, umshini wokugeza izitsha, umshini wekhofi, izitsha zasekhishini.
- Igumbi lokulala elithokomele: umbhede ophindwe kabili, ideski nendawo yokugcina izinto.
- Indlu yokugezela ehlanzekile: ubhavu, usinki, isibuko nendlu yangasese.
Ungakwazi futhi ukujabulela isikhala esihle esingaphandle esinethala elifakwe itafula nezihlalo, esilungele ukudla kwasemini kuyilapho utusa umbono.
4.62 · 39 okushiwo abanye
Ifulethi litholakala eSaint-Ismier, ngaphansi kwemizuzu eyi-15 ukusuka eGrenoble ngemoto. Uzokwazi ukujabulela ngokugcwele izintaba, ihlobo nobusika!
Eduze, uzoba ne-Innovallée Park (izinkampani ezingama-350 - imizuzu emi-4 ngemoto) kanye
I-Technological Park of Crolles (imizuzu engu-6 ngemoto).
Ungakwazi ukujabulela usebe lwe-L'Isère kanye nendlela yakho yebhayisikili ukuze uhambe ngezinyawo. Itholakala ngebhayisikili ukusuka efulethini futhi itholakala ku-950m. Le ngoma ixhumanisa i-Grenoble ne-Chambéry.
Mayelana nezitolo zasendaweni, i-ZA ISIPARC (imizuzu emi-2 ngemoto nemizuzu eyi-12 ngezinyawo) inebhikawozi elinendawo yokudla okulula, isitolo sezinto eziphilayo ze-Naturalia, kanye nomdayisi wezinhlanzi owaziwayo.
Izitolo, ezihlukahlukene kakhulu (ugwayi, i-supermarket casino ne-super U, amakhemisi, abalungisa izinwele, i-SPA, indawo yokudlela njll...) zitholakala ku-RD 1090 ngemizuzu engu-6 ngemoto.
- Umnyuziyamu "Musée du blé de Domène".
- Indlu enezivikelo eziqinile "La Bâtie Champrond".
- Indlu "Bergès".
- Indawo yokudlela yaseFrance "L'Arôme".
- Indawo yokudlela "Bistro La Gare".
- Indawo yokudlela "La Veyrie".
Okuzo kwenziwa :
- Hamba eduze kwe-Isère, ngezinyawo noma ngebhayisikili.
- Thola enkabeni yedolobha Grenoble.
- Jabulela isikhungo sokungcebeleka se-"Bois Français".
Kusukela esicelweni sakho sokubhukha, ukuya ukuhlala kwakho esikhungweni kuze kube yilapho usuhamba, wonke ama-Gooddays azoba senkonzo yakho ukuze enze ukuhlala kwakho kube okujabulisayo! Uma kunesidingo, ungangabazi ukubathinta ngenkundla ye-Airbnb ngokuqondile noma ngocingo ngenombolo etholakala kuphrofayela yami ngaphambi nangesikhathi sokuhlala kwakho. Atholakala ngo-8:00 a.m. kuya ku-9:00 p.m. futhi ngibheke ngabomvu ukukubona!
Kusukela esicelweni sakho sokubhukha, ukuya ukuhlala kwakho esikhungweni kuze kube yilapho usuhamba, wonke ama-Gooddays azoba senkonzo yakho ukuze enze ukuhlala kwakho kube okujabu…
Hlola ezinye izinketho ezise- Saint-Ismier namaphethelo